Global Voices teny Malagasy » Shina: Fisaonana ho an’ireo tranonkalan’ny manam-pahaizana · Global Voices teny Malagasy » Print
Shina: Fisaonana ho an'ireo tranonkalan'ny manam-pahaizana
Voadika ny 13 Febroary 2019 3:34 GMT 1	 · Mpanoratra Oiwan Lam Nandika Harentsoa Tsiky Rakotoson
Tamin'ity herinandro ity, tranonkala roa manan-danja maro no voatery nakatona, ny iray Pauwang (泡網), ny iray hafa Wei-cheng Za-Wan (圍城 雜文).
Anisan'ny iray amin'ireo tantara lavabe amin'ny BBS ao Shina ny Pauwang ary noterena nakatona tamin'ny 12 martsa 2009.
Araka ny filazan'ny Hecaitou , ny BBS dia sehatra ho an'ny mpamoaka lahatsoratra sy ny matihanina. Mifandraika amin'ny klioban'ny sary ao Beijing ny BBS ary vao haingana izy ireo no nikarakara fampirantiana tao Beijng 798. Ampahany ihany tamin'ireo tahiriny no voavonjin'ny tranonkala ary efa nafindra ao amin'ny http://uupage.com vonjimaika.
Mikasika ny lahatsoratr'i Wei-cheng indray, nanoratra fanambarana fanakatonana tamin'ny 10 martsa (via chinagfw ) ny webmaster:
Hikatona ity tranonkala ity!
Nilaza ny faneriterena avy any ambony fa be loatra ireo vaovao mampidi-doza ao, ka mila manadio izany izahay! Tsy hisokatra intsony ity tranonkala ity, mitadiava sehatra hafa azafady! Efa taona maro izay, reraka ankehitriny ny webmaster. Na dia tsy nilaza aza ny any ambony fa hakatona an-katerena ny tranonkala, dia tsy vitako intsony ny mitantana izany. Nahazo antso an-tariby nafindran'ny mpamatsy tolotra aterineto, tena tsy liana intsony amin'ny fitantanana ity tranonkala ity aho.
Efa nampoiziko izao raha ny tena marina. Tamin'ity taona ity, ratsy loatra ny tontolo ara-toekarena. Raha tsara kokoa izany dia mety ho ela velona ity tranonkala ity. Rehefa ratsy ny toekarena ary miha mitombo ny olana ara-tsosialy, dia hampihena ho azy ny sehatry ny fahalalahana miteny izany.
Tsy mampidi-bola ny tranonkala, fa manome fotsiny izahay.
Ny fahatsapako, ahoana no hilazana azy?Tony kokoa aho, mora milamina noho ny webmastern'ny Pingmin Zawen. Satria efa nampoiziko fa ao Shina, hahazo ny anjarany ny karazana tranonkala tahaka izao. Somary tara ny andro tahaka izao hanandramana ny Wei-cheng. Misy fotoana aho mahatsapa fifaliana ho an'ny firenena, fahatsapana fa niditra tamin'ny “vanim-potoana vaovao” isika.
Saingy tantara izany.
Pingmin Zawen Tranonkala iray hafa koa no noterena hikatona ny 7 Novambra 2008 (na dia talohan'ny Bullog.cn), talohan'ny nanombohan'ny fanentanana anti-smut tamin'ny fomba ofisialy. Ankehitriny, novaina ho tranomboky antserasera ny anaran-tsehatry ny tranonkala.
Ho an'ny rakitsoratra ara-tantara, adikako eto ny ampahany amin'ny fanambaran'ny webmaster (via zjol ):
Ilay antsoina hoe vaovao mampidi-doza, dia izay rehetra amaritanao azy. Milaza ianao hoe mampidi-doza izy ireo, dia izay izany. Amin'ny maha-Webmaster sy mpikambana amin'ny antoko manana hevitra ara-politika, amin'ny maha Webmaster mavitrika amin'ity tranonkala ity, dia tena nitandrina tsara aho tamin'ny fitantanana ny tantara noforonina mipoitra amin'ny tranonkala. Na izany aza, mahay mikaroka ny eo amin'ny fitantanana voalaza. Inona koa no holazaiko?
Za Wen, na tantara foronina (雜文) dia karazana haisoratra mifandray amin'ny fanehoan-kevitra ara-politika ao Shina maoderina. Malaza ny lahatsoratr'i Lu Xun noho ny feony manakiana. Ny fanakatonana ny Pingmin (midika hoe olom-pirenena tsotra) Zawen kosa dia nampahatsiahy ny olona ny famotopotorana ny literatiora sy ny famoretana ireo manam-pahizana izay niseho tamin'ny alalan'ny tantara shinoa. Marobe ireo lahatsoratra fiaraha-miory (amin'ny teny Shinoa avokoa) momba ny Pingmin Zawen:
Ho fahatsiarovana ny Pingmin Zawen avy amin'ny Hermit any an-tendrombohitra (山居野士）.
Fisaonana ny Pingmin Zawen  avy amin'ny kaopin-dite tsara ravaka (靜茶淡雅）.
Fombafomba fandevenana ny Pingmin Zawen  avy amin'ny pmcs
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/02/13/134859/
 via chinagfw: http://chinagfw.org/2009/03/blog-post_5708.html
 via zjol: http://blog.zjol.com.cn/321534/viewspace-751794
 Ho fahatsiarovana ny Pingmin Zawen : http://chinagfw.org/2009/03/blog-post_5438.html
 Fombafomba fandevenana ny Pingmin Zawen: http://pmcs.blog.sohu.com/105053566.html